လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်သံဃာများအတွက် အများပြည်သူ၏ အလှူများ လက်ခံ၇ရှိကြောင်း ရွှေည၀ါဆရာတော် ပြောကြား | MoeMaKa Burmese News & Media
လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်သံဃာများအတွက် အများပြည်သူ၏ အလှူများ လက်ခံရရှိကြောင်း ရွှေည၀ါဆရာတော် ပြောကြား
မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဒီဇင်ဘာ လဆန်းက ရောက်ရှိနေပြီး၊ တရားပွဲများတွင် လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ လူနာများ၊ သံဃာတော်များအတွက် စောင့်ရှောက်ကူညီမှု ရရှိရေး ဆော်သြနေသည့် ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟက အများပြည်သူတို့ထံမှ အလှူငွေများ လက်ခံရရှိကြောင်း၊ ကူညီလှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း မိုးမခသို့ ပြောကြားသည်။
ယမန်နေ့က ဘန်ကောက်ဆေးရုံကြီးသို့ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (ဦး)ကိုကိုကြီးအား လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပြီး ဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူနေသော သံဃာတော် ဦတိက္ခဥာဏကို သတင်းသွားရောက် မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ဆေးရုံစ တက်စဉ်က နိုင်ငံတော်က ဘတ် ၁ သန်း ဆေးရုံကြီးသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရရ သံဃာတော်များ၊ လူနာများအားလုံးကို လုံလောက် ပြည့်စုံသော ဆေးဝါး ကုသမှု၊ ပြုစု စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာပြည်တွင်းက တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များ ထုတ်ပြန်သလို အဆင်ပြော ချောမွေ့နေသည်၊ သက်သာနေသည်ဆိုသည်ကို ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် လာရောက် စုံစမ်း ကြည့်ရှုကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆရာတော်က ဖြေကြားသည်။
ယခင် ရက်များက လက်ခံရရှိသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အလှူငွေများကို ဆရာတော်၏ အဖွဲ့က အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ပေးသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ ဘန်ကောက်မြို့ ၊ ဘန်ကောက်ဆေးရုံကြီး၌ (13.12.12)နေ့ကြေးနီစီမံကိန်း လက်ပံတောင်းတောင်၌ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသော ဦးတိက္ခဥာဏ အား ရွှေည၀ါ ဆရာတော်ဘုရားမှ ပထမအကြိမ် ဘတ်ငွေ (50000) ငါးသောင်း (13.12.12) နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ဘတ်ငွေ (50000) ငါးသောင်း ( 19.12.12) တို့ကို ဆေးကုသရာ၌ အထောက်အပံ့ အတွက် လှုဒါန်းခဲ့ပါသည် ။
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်လှုဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ ပြုသော ထိုင်းနိုင်ငံ နေရာ အသီးသီးမှ တရားပွဲ (ဓမ္မပူဇာ) အလှုရှင်များ ဆရာတော်ထံ ကိုယ်တိုင် လာလှုသော အလှုရှင်များ စာရင်းမှာ ———
၁ ။ စမူပကန်ခရိုင် ၊ ပါနန်းမြို့ ၊ စဖန်ပါ မြန်မာ မိသားစု တရားပွဲမှ အလှုရှင်များ (4.12.12) ။
၂ ။ ဖေ့ကစင် (41) လမ်း (CPC) စက်ရုံ မြန်မာ မိသားစု တရားပွဲမှ အလှုရှင်များ (9.12.12) ။
၃။ မဲဆောက်မြို့ဈေးသူ/ဈေးသားများ ဦးစီး၍ ကျောင်းကြီးတိုက် တရားပွဲမှ အလှုရှင်များ (14.12.12) ။
၄ ။ ချင်းမိုင်မြို့စေတနာ နာရေးကူညီမှု့ အသင်း ဦးစီးသော မြန်မာ မိသားစု ၀ပ်ဆိုင်မွန်ကျောင်း တရားပွဲမှ အလှုရှင်များ (16.12.12)
၅။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ မှ ဘတ်ငွေ (11000) တစ်သောင်း တစ်ထောင် ။(18.12.12)။
၆။ နော်ဝေနိုင်ငံ အလှုရှင် တစ်ဦးမှ မစောလဲ့နန္ဒာ(DVB) အား ကိုယ်စား လှုဒါန်းငွေ (6500) ခြောက်ထောင့် ငါးရာ (19.12.12) ။
၇။ မဟာချိုင်မြို့ ၊ ၀ပ်ကန်ဖ ၊ ဦးစိုးပိုင် နှင့် ကိုကျော်ရဲအောင် ဦးစီးသော ရှင်ဖူးစက်ရုံ မြန်မာမိသားစု မှ ဘတ်ငွေ (10700) တစ်သောင်း ခုနှစ်ရာ (5.12.12) ။
၈။ ကိုဝင်းကို နှင့် ဇနီး မခက်ခက်ဦး မှ ဘတ်ငွေ (4000)လေးထောင် (5.12.12) ။
၉။ ကိုသန်းထွဋ် ၊ မဥမ္မာလင်း ၊သား ပြည့်ဝန်းသိမ်း မိသားစု မှ ဘတ်ငွေ (2000) နှစ်ထောင် ။(5.12.12) ။
၁၀။ ကိုလွင်မိုးမြင့် ၊ မမေမေကျော် ၊ သမီး ခင်ကျော်ဇော ၊ ခင်ကျော့ရှင်း မိသားစု ဘတ် (2000) နှစ်ထောင် ။ (5.12.12)။
၁၁။ ကိုအောင်ကျော်၊ မသီရိထက်စံ(ခ) မသူဇာ(DVB) မှ ဘတ် (2000)
နှစ်ထောင် ။ (5.12.12) ။
၁၂။ ကိုမျိုးနိုင် ဘန်ကောက်မှ ဘတ် (1000) တစ်ထောင်ဘတ် ။
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်သည် ပြည်ပ၌ ဆေးကုသနေသော ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏ အား ထောက်ပံ့ရုံသာ မကဘဲ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရရှိ၍ မန္တလေး – မုံရွာ ဆေးရုံ တို့ မှ ရွှေ့ပြောင်းကာ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၌ ဆေးကုသနေသော သံဃာ (၄)ပါး အတွက် တစ်ပါးလျှင် (၁)သိန်း ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၄)သိန်း တိတိကို (19.12.12) နေ့စမ်းချောင်း ကိုကိုကြီး မှ တဆင့် လှုဒါန်းကြောင်း ကြားသိရပါသည် ။
ဆရာတော်အား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် လိပ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ကြေနီတောင်၌ ဒဏ်ရာရသော သံဃာတော်များ လှူဒါန်းအတွက် ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ ဘဏ်နံပါတ်နှင့် အကောင့်နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်သည် ၂၀၁၂ ခု ဒီဇင်္ဘာလအကုန်အထိထိုင်းနိုင်ငံ၌် သီတင်းသုံးနေထိုင်ပါမည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ဆရာတော်ကိုင်ဆောင်သော ဖုန်းမှာ +66 905494281 ဖြစ်ပါသည်။
Bank or Institution City BranchName Swift Code
BANGKOK BANK… BANGKOK…HOSPITAL…. BKKBTHBK.
MR.SOMKID SEENGAN.. 8767013801….
One Response to လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်သံဃာများအတွက် အများပြည်သူ၏ အလှူများ လက်ခံ၇ရှိကြောင်း ရွှေည၀ါဆရာတော် ပြောကြား
Nan Shilar Shilar on December 22, 2012 at 2:20 pm
်facebook ကို share လုပ်လို့မရဘူးလား